सावधान ! यदि चर्को आवाज सुनेर चक्कर आउँछ भने हुनसक्छ, यो रोग – Etajakhabar
सावधान ! यदि चर्को आवाज सुनेर चक्कर आउँछ भने हुनसक्छ, यो रोग
ताजा खबर :- कतिपय मानिसहरूलाई निकै तीव्र एवम् चर्को आवाज सुनेर चक्कर आउने वा बेहोस हुने समस्या हुनसक्छ । यस्तो कानको एक रोगको कारण हुनसक्छ, जसलाई मेनियार्स डिजीज (Meniere’s Disease) भनिन्छ ।
मेनियार्स डिजीज के हो?
मेनियार्स डिजीज कानको भित्रि भागमा हुने रोग हो । यसको कारणले गम्भीर चक्कर आउन सक्छ, कानको भित्र आवाज गुन्जने समस्या हुनसक्छ । जसलाई टिनिटस भनिन्छ । आंशिक वा अस्थायी बहिरोपन हुनसक्छ । यसको साथै कानमा तीव्र दुखाई वा दबावको अनुभव हुनसक्छ । यो रोग बहिरोपनको कारण पनि बन्न सक्छ ।
मेनियार्स डिजीजको लक्षण
यस रोगमा तिव्र आवाज सुनेपछि अचानक चक्कर आउन सक्छ वा टिनिटसको थोरै समय पछि चक्कर आउन सक्छ । केही मानिसहरूलाई कहिले-कहीँ केवल एक पटक चक्कर आउँछ । कतिपय मानिसलाई कयौँ दिनको क्रममा धेरै पटक चक्कर आउन सक्छ । मेनियार्स रोगले पीडित केही मानिसलाई यति चक्कर आउँछ कि उनीहरू आफ्नो सन्तुलन समेत गुमाउन सक्छन् ।
मेनियार्स डिजीजको कारण
वैज्ञानिकहरू अझैँ यसको कारण पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । उनीहरूको अनुसार, यो कानको भित्रि भागमा रहेको नलीहरूमा रहेको लिक्विडको स्तर वा यसको मिक्स्चर सँग सम्बन्धित हुनसक्छ । एक्सपर्ट्स फिजिकल अब्जरभेशन र सिम्पटम्सको आधार यसको पत्ता लगाउँछन् । कानको जाँच र सुन्ने क्षमता टेस्ट गरी यसको पत्ता लगाउन सकिन्छ कि यस रोगले कुनै व्यक्तिको सुन्ने क्षमता कति प्रभावित भएको छ ।
मेनियार्स डिजीजको उपचार
आज सम्म यस रोगको कुनै उपचार पत्ता लागेको छैन । उपचारको रूपमा चक्कर कम गर्नेको लागि औषधी, आहारमा नूनको मात्रा कम गर्ने र वाटर पिल्स समावेश छन् । बाहिरी कानमा फिट हुने र कानको बीचमा एयर भाइब्रेशन गर्ने उपकरणले सहायता मिल्न सक्छ । बढी गम्भीर अवस्थामा सर्जरीको आवश्यकता पनि हुनसक्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक २३, २०७४ समय: २:२०:१२